Ebee ka m kwesịrị ịkwụsị nkwụsị m? | FXCC Blog
Ebee ka m kwesịrị ịkwụsị nkwụsị m?
Apr 16 • N'etiti ahịrị • 7675 Echiche • Comments Off na Ebee ka m ga-etinye nkwụsị m?
Ihe mere a ga-eji were ọ bụla ahịa na nkwụsị nkwụsị bụ isiokwu anyị kpughere na kọlụm ndị a. Ma mgbe ụfọdụ, karịsịa maka ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ anyị, ọ bara uru na-echetara onwe anyị ihe mere anyị ji eji kwụsị na ọ bụla ahịa.
Dị nnọọ mfe ma ọ bụrụ na anyị anabata echiche ahụ na azụmahịa anyị bụ ọrụ na-enweghị nchebe, nke ahụ enweghị nkwa ọ bụla, ọ ga-adị mkpa ka anyị lụsoo ebe ahụ na-enweghị nchedo (nke ahụ enweghị nkwa) site na ichedo onwe anyị n'oge niile. Kwụsịnụ na-enye nchedo na nkwa dịka anyị maara na anyị nwere ike ịhapụ 'x' ego nke akaụntụ anyị kwa ahia ma ọ bụrụ na anyị ejiri nkwụsị. Ịchịkwa ihe ize ndụ anyị na ijikwa ego bụ isi maka ma ndụ anyị na ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ a ma na nke a nwere ike iji ya mee ihe site na iji nkwụsị.
Arụmụka ahụ na-eji nkwụsị eme ihe dị nnọọ ọnụ ọchị, ihe kachasị asọ oyi bụ nke na-anwale ule oge ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ weebụ jikọtara ya na ihe dị ka afọ iri na ise gara aga na-aga ihe dị ka nke a; "Ọ bụrụ na ị na-eji kwụsị onye na-ere ahịa gị maara ebe njedebe gị ga - akwụsị ịchụ nta gị." Otu mba a na - enweghị isi na - etolite ịghọ akụkọ ụgha bụ ihe omimi nye ọtụtụ ndị ahịa na - enwe ọganihu na ndị nwere ahụmahụ, mana ọ bara uru ịgbagha.
Ịchụ nta ahịa na-akwụsị site na mberede ma ọ bụrụ na e mebere ya, ma ọ bụghị ndị na-ere ahịa gị, ma ọ bụ ebe a na-akụ iwu ahụ site na ihe nlereanya ECN ma ọ bụ STP, ịchụ nta na-akwụsị. Tụlee nke a dị ka ihe atụ; ugbu a ọnụahịa e hotara maka EUR / USD dị nnọọ nso na 13800, ọ dịghị eche echiche nke ukwuu iji chọpụta na ọtụtụ usoro iwu ụlọ ọrụ ga-ejikọta na nọmba a dị oké mkpa.
Ma ịzụta, ree ma ọ bụ wepụ iwu iwu bara uru bụ ọkwa a dị oke egwu. Ya mere, ọ bụrụ na anyị ga-azụ ahịa ma jiri nọmba a dị ka nkwụsị anyị, ọ bụ ihe ziri ezi ịsị na anyị nwere ike ịkpọ nsogbu dịka ọ ga-adịrị ka iwu ọ bụla na-ebute na ọkwa a dị ka ọ dị. O nwere ike ịbụ na 13800 gosipụtara na ọ bụrụ na anyị kwenye na ọ bụ ihe dị njọ, ma ịkwụsị na-akwụsị na ọkwa a nwere ike ịbụ nsogbu nsogbu.
N'ihi ya, ọ bụrụ na anyị emee ihe ọ bụla, anyị ga - echekwa na ị gaghị etinye aka na njedebe ma ọ bụ gburugburu ọnụ ọgụgụ ebe ọzọ ka anyị ga - iji họrọ ebe anyị na-etinye nkwụsị anyị? O doro anya na anyị kwesịrị iji nchịkọta nke amụma na ihe akaebe na-adabere na ihe omume price na-adịbeghị anya.
Ogologo oge dị ugbu a, nkwụsị na nso nso a ma na-emegharị ọnụ ọgụgụ
Ebe anyị na-edebe nkwụsị anyị na-adabere n'oge oge anyị na-ere ahịa. Dịka ọmụmaatụ, anyị agaghị eji otu atụmatụ ahụ ma ọ bụrụ na ịzụpụta chaatị ise nke ise na-achọ 'nchapu' dịka anyị ga-eji ahia n'ụbọchị, ma ọ bụ maka ịzụ ahịa azụ ahịa. Ma maka ahia ụbọchị, ikekwe ịzụpụta chaatị elekere otu hour, ma ọ bụ maka ịzụta ụkpụrụ ndị ahụ bụ otu ihe ahụ. Anyị ga-achọ ihe atụgharị dị ka ihe àmà na-egosi site na ọnụahịa ihe ngosi nke na-egosi ihe ndị na-adịbeghị anya nke na-adịbeghị anya ma na-etinye nkwụsị ya n'ụzọ kwekọrọ na ya.
Ọ bụrụ na ọ na-adị mkpụmkpụ na nkwụsị ahịa azụ ahịa, anyị ga-etinye nkwụsị anyị nso nso na-adọrọ uche na nso nso ugbu a iji wepụta nọmba ọnụ ọgụgụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị ga-azụ ahịa azụ na April 8th na EUR / USD, anyị gaara etinye ma ọ bụ nso 13680, nke kachasị dị ala. Ogologo oge anyị ga-abata, dị ka atụmatụ zuru ezu anyị na-atụ aro na anyị bụ ihe na-emekarị enyi gị kwa izu, na ihe ruru. 13750, ya mere ihe ize ndụ anyị ga-abụ 70 pips. Dị ka o kwesịrị ịdị, anyị ga-eji oge nhazi oge iji jide n'aka na ihe ize ndụ anyị na ahia a bụ naanị 1%. Ọ bụrụ na anyị nwere nọmba akaụntụ nke $ 7,000 anyị nwere ike ibute 1% ma ọ bụ $ 70 dịka ihe ize ndụ nke 1 pip kwa dollar. Ka anyị lee anya ugbu a site na iji otu nche ahụ na nso nso a.
N'ileghachi anya na awa awa anọ, ihe ga-amasị anyị ga-abụ mkpụmkpụ ahịa nke dabere na ụgwọ ọrụ e mepụtara kemgbe ụnyaahụ. Anyị ga-achọpụta ihe dị elu nke dị nso. 13900 nke na-abụghị kpọmkwem ọnọdụ anyị ga-etinye nkwụsị anyị nyere nchegbu anyị banyere ịmegharị ọnụ ọgụgụ. Ya mere, anyị nwere ike ịhapụ nkwụsị anyị n'elu ma ọ bụ karịa n'okpuru ọnụ ọgụgụ a. Dị ka ụzọ anyị si kwuo, anyị gaara agba ọsọ na 13860 n'ihi ya ihe ize ndụ anyị ga-abụ 40 + pips. Ọzọ anyị ga-eji ụda ihe nhazi iji chọpụta ego ejikwara dabere na ihe ize ndụ ọkara anyị kpebiri na atụmatụ azụmahịa anyị. Ọ bụrụ na anyị nwere akaụntụ banyere $ 8,000, anyị ga-etinye 1% ma ọ bụ $ 80 n'ihe ize ndụ n'ihi ya, ihe ize ndụ anyị ga-abụ ihe dị ka $ 2 kwa pip na-adabere na nkwụsị nke iri anọ. Ọ bụ nke a dị mfe ịhapụ nkwụsị anyị ma gbakọọ ihe ize ndụ anyị maka ahia. Mana gịnị ma ọ bụrụ na anyị kpebie ịkpụ ụcha, anyị nwere ike iji ụzọ ndị yiri ya? Eleghị anya ọ bụghị dịka ọ na-esiwanye ọtụtụ, kwe ka anyị kọwaa ..
Ọ bụrụ na anyị na-akwagharị, nke na-ekwu banyere ịzụ ahịa ịzụ ahịa, pụtara na ị ga-esi na mwepụ ahịa oge, dị ka nke 3-5 nkeji oge, mgbe ahụ, anyị ga-eji usoro dị iche iche dị iche iche dị nnọọ iche dị ka n'ụzọ doro anya na anyị enweghị oge na okomoko nke inwe ike ịkọ ụda ma ọ bụ elu. E nyekwara anyị na anyị nwere ike ịchọta onwe anyị ahia 'n'agbata akara' nke ebe ndị a na-arụ ụka, enwere ike ikwu na ịnwa ịchọta ihe ndị dị elu na ihe dị n'ime na-enweghị isi.
Ya mere, anyị ga-eji usoro dị iche iche dị iche iche gbakọọ nkwụsị anyị, dabere na ihe ize ndụ dị na nlọghachi. Ya mere, anyị nwere ike ịhọrọ ịnweta ihe anyị kwuru na mbụ na ogidi anyị 'ọkụ ma chefuo' atụmatụ. Ọ bụrụ na anyị agbaso usoro dị otú ahụ, anyị ga-abanye ahịa anyị na-achọ 1 dịka: 1 nwere ihe ize ndụ na nloghachi. Anyị nwere ike iji nkwụsị nkwụsị iji belata nkwụsị nke nta ma na-achọ 10-15 pip ịlaghachi (na-agbasa ma gbasaa) na ọkwa yiri nke pips. Mana ihe ọ bụla oge nkwụsị dị oke mkpa ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ha na-eme ka ọ dịkwuo njọ na ala ala anyị na-arụ ọrụ.
" Yahoo mbili ịrị elu 8% na ngwụcha ahịa iji nyere aka melite mmetụta na USA ahịa Azụmahịa Europe na-amalite ịzọpụta ụnyaahụ ụnyaahụ ka Nikkei na-ebili site na 3% n'abalị »